Hindise sharciyeed in la kordhiyo ciqaabta dambiyadda argagixiso - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Henrik Montgomery/TT, Fredrik Sandberg/TT
Hindise sharciyeed in la kordhiyo ciqaabta dambiyadda argagixiso
La daabacay onsdag 27 november 2019 kl 10.25
Hindise sharciyeed cusub oo la xiriira dambiyadda argagixisada ayaa shalay loo gudbiyay dowladda iyo wasiirka caddaalada Morgan Johansson. Hindisaha waxaa qeyb ka ah in la kordhiyo ciqaabta dambiga argagixiso iyo in la ballaariyo ficilada loo aqoonsado dambi argagixiso.
Dambi argagixiso ayaa lagu tirin doonaa danuubta lala beegsado qeyb ka mid ah bulshada tusaale ahaan dadka laga tirada badan yahay, dadka dibedaha ka soo jeeda ama ajaaniibta ama dadka loogu yeero HBTQ oo ah dadka galmadoodu ka duwan tahay midda loo badan yahay.
– Waxaa caddaaneysa hadii qof uu dhibaateeyo dadka laga tiro badan yahay in ficilkaasi uu yahay mid argagixiso. Berigii hore sidaasi uma caddeyn ayuu yiri wasiirka caddalada Morgan Johansson.
Baaritaanka sharciga cusub ee argagixisada ayaa ujeedkiisu yahay in meel la isugu keeno sharciyadda ka dhanka ah argixisada oo maanta ah saddex sharci oo hoos imaanaya hal sharci.
Sharcigan cusub ayaa daboolaya dhammaan sharciga argagixisada si dambi argagixiso uusan dhexda ugu bixin sharuucda. Booliska, maxkamadaha iyo hay’adda sirdoonka ee Säpo ayaa si fudud oo wax ku ool ah wax kaga qaban doono dambiga argixisada.
Sharciga ayaa dhaqan geli doono kowda bisha Luulyo ee sannadka 2021.
Qoddob kale oo muhiim ah kuna jira hindisaha ayaa ah in dambi argagixiso xitaa haddii lagu soo galo meel ka baxsan Sweden in maxkamadiisa ka dhici karto Sweden.
Waxaa sidoo kale, meesha laga saaray xayiraadyadda ku xeernaa dambiyadda argagixiso.
– Wax macna ma sammeeneyso wakhtiga dheer ee ka soo wareegaa kolka dambiga argagixso uu dhaco, haddii caddeyn cusub la helo, qofka waa la maxkamdeenaa, ayuu yiri Morgan Johansson.